Atlas College oo Arday badan oo Soomaaliyeed shahaado siiyay. - Caasimada Online
Home Warar Atlas College oo Arday badan oo Soomaaliyeed shahaado siiyay.
Atlas College oo Arday badan oo Soomaaliyeed shahaado siiyay.
Waxaa magaalada Nairobi lagu qabtay Xaflad si wayn loo soo agaasimay ayna ka soo qeybgaleen dad Weyne aad u badan Madax siyaasiyiin uu ka mid ah Xildhibaan yuusuf Xasan oo laga soo doorto Degmada kamakuji iyo marti sharaf kale.
Dad Weyne gaaraya Boqolaal oo u badnaa ardaydii Qalin jabinaysay ayaa halkaas waxay ka soo Jeediyeen sida ay ugu faraxsanyihiin in ay maanta Qalin Jabiyaan, waxayna sheegeen in maamulka Machadaka Atlas Collage uu wax badan u soo qabtay.
Cabdi Xasan Caymoow oo ka mid ah maamulka Machadaka Atlas Collage ayaa ugu horayn halkaas ka hadlay, waxa uuna sheegay in ardayda qalin Jabinaysa ay yihiin kuwa aad u badan, waxa uuna sheegay in ay iskugu jiraan dhowr qeybood.
“ waxaan u Qabanay Xafladan maanta arday badan uu u gudbaysa Kals 8, iyo kuwa kale oo qalin jabiyay iyo kuwa imtixaan u fadhiisan doona, dhamaantood waxaan ugu tala galnay in aan ku dhiirino waxbarashada”ayuu yiri Cabdi xasan Caymoow oo ka mid ah maamulka iskuulka oo halkaas ka hadlay.
Xasan Maxamed farax oo ka mid ahaa Waalidiinta kuna hadlay magaca waalidiinta dhigata aMachadka atlas Colage ayaa halkaas ka hadalay, waxa uuna amaan u soo jeediyay arkarda dhigata halkaas iyo macalimiinta oo uu ku sheegay kuwa ardarada wax baraan.
Sidoo kale waxaa halkaas ka hadlay Xildhibaan Yuusuf Xasan oo ka mid ahaa Madaxdii halkaas timid, waxa uuna amaan u soo jeediyay maamulka Atlas Collage iyo macalimiinta, waxa uuna sheegay in ay xaafada islii ay ku soo kor dhiyeen wax badan.
“ Maamulka Atlas Colage waxaan oran karaa Degmada kamakuji gaar ahaan xaafad islii wax badan ayay ku soo kor dhiyeeb maxaa Yeelay waa iskuul Waxbarasho oo aad loola dhacay, wax badana u qabtay dhalinyarada daan xaafada islii”ayuu Yiri Xildhibaan Yusuf xasan.
“ waxan dhalinyarada Hooyooyinka iyo dadka dagan xaafada islii u sheegayaa waxaa socota Doorasho in ay qaataan sharci, oo ay is diiwaan galiyaan si ay u doortaan qofka ay rabaan, anigana Musharax ayaan ahay”ayuu yiri Yusuf Xasan.
Waxaa halkaas ka hadlay Maamulaha Guud atlas Collage Ustaad Cabdi Casiis axmed Kurbiye, waxa uuna sheegay in atlas Colage uu ka duwan yahay kuwa kale, waxa uuna sheegay in ay wax badan qabteen intii ay jireen.
“ Ardayda atlas Colage waa arday ka duwan kuwa kale, waxaa ka qalin jabiyay arday gaaraysa 120- ayaa qalin jabinaysa kuwa kale Sanadka horaantiisa ayay Qalin jabinayaan, waana farxad sidaad aragtaan waxaa iskugu Yimid halkaan Waalidiinta dhalay caruurta”ayuu yiri Ustaad Cabdi Casiis axmed Kurbiye.
“ Atlas Colage waxaa la aas aasay 1998-dii, Waa collage kii ugu horeeyay oo laga furo xaafada islii,Umada wax badan ayay naga sugaysaa, Waxaan dhignaa Qeyb Colage ah aan ku dhingno Luqadaha, Maamulka qibrad ayuu leeyahay mar hore ayaana ka furamy,Waana Hormuudka waxbarasshada ee xaafada islii”ayuu markale yiri Ustaad Cabdi Casiis axmed Kurbiye oo aha maamulaha Atlas Colage.
“ Ilaa 4 Qeybood ayuu ku leeyahay Gaar ahaan xaafada islii, waxaan tagay xataa magaalada hargaysa oo aan xarun ka Furnay Xarun, , Muqdisho waan ka Furaynaa, Dad kana waan soo dhawaynaynaa, Kuwa aan haysan dhaqaale ee Jooga islii waxaan ugu dhigaynaa si free ah”ayuu markale yiri Ustaad Cabdi Casiis axmed Kurbiye .
Ugu danbayntii Xafladaas ayaa ku soo idlaatay Jawi Wanaagsan waxaana halkaas arday gaaray 100 lagu Gudoon siiyay shaqaahoodin iskugu jira luqadaha, kuwa dugsi Sare iyo kuwa kale.
sidaan sii maahan
waan yeelay sidaad yeel i tiri